Maya Magazine: ရေးတတ်ရင် ဝတ္ထု ဖြစ်တယ် ရေးသူ - မောင်သာရ
ရေးတတ်ရင် ဝတ္ထု ဖြစ်တယ် ရေးသူ - မောင်သာရ
[ဆရာမောင်သာရ ရဲ့ ရေးတတ်ရင် ဝတ္ထု ဖြစ်တယ် စာအုပ်မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။]
ရေးတတ်ရင် ဝတ္ထုဖြစ်တယ် (၁)
မင်းက မင်းကို မမြင်တတ်ဘူး.. ပြောတော့လည်း မကြိုက်ဘူး။ သည်ခေတ်လောက် စာရေးချင်တဲ့ လူတွေအတွက် ရေးစရာ ပေါတာ ဘယ်ရှိမလဲ။ ငါ့မှာဆိုလဲ ရေးစရာတွေ တပုံတခေါင်းကြီး။ ရေးလို့ကို မကုန်နိုင်ဘူး။
မင်းကျမှ ဘာရေးရမှန်း မသိဘူးဆိုပြီး လာညည်းနေတယ်။ အတော်ဟုတ်တဲ့ကောင်။
အရေးကြီးတာက မြင်တတ်ဖို့ လိုတယ်ကွ။ စာရေးဆရာ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် မြင်တတ်ရတယ်။ ကြည့်တတ်ရတယ်။
တကယ်တော့ စာရေးတယ်ဆိုတာက ဘာမှ သိပ်ခက်တာ မဟုတ်ဘူး။ လေ့ကျင့်လိုက်ရင် ရတာပဲ။ တခုတော့ ရှိတာပေါ့လေ။ ဖတ်လို့ကောင်းအောင်၊ ပရိသတ်ကြိုက်အောင်၊ နားလည်း လည်လာအောင် ရေးတတ်ဖို့ ဆိုတာကတော့ သိပ်မလွယ်လှ ဘူးပေါ့။
ဒါပေမယ့် အရေးအကြီးဆုံးကတော့ 'အမြင်' ရှိရမယ်။ ကြည့်တတ် မြင်တတ်ဖို့ လိုမယ်။
တခြား ဝေးဝေးလံလံတွေ လျှောက်ကြည့်မနေနဲ့။ သည်လမ်းက ဘာလမ်းလဲ။ ဘာလမ်းဖြစ်ဖြစ် မင်းနေတဲ့လမ်း။ သည်လမ်းထဲမှာ မင်းနေလာခဲ့တာပဲ ဘယ်လောက်ကြာ ပြီလဲ။ ငါသိတာပဲ ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီ။
ငါက မင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့သာ သည်လမ်းကို ရောက်ဖူးတာ။ ရောက်တာကတော့ ခဏခဏ ပေါ့လေ။ မင်းရှိနေတော့လည်း ရောက်ဖြစ်နေတာပေါ့။
ဆိုလိုတာက ဘာပဲပြောပြော သည်လမ်းအကြောင်းကို မင်းက ငါ့ထက် ပိုသိမယ်။ ငါသိတယ် ဆိုတာက မင်းသိတာထက် ဆယ်ပုံ့တပုံ လောက်ပဲ ရှိမယ်။
ပြီးတော့ သည်လမ်းမှာ မင်းက ရပ်ကွက်လူကြီး။ ရပ်ကွက်က ရွေးချယ် တင်မြောက်ထားတာ။ သည်လမ်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြသနာ အရပ်ရပ်ကို မင်းကိုယ်တိုင် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနေရတာ။ သည်လမ်းရဲ့ အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ အူသိမ်အူမ မကျန် မင်းမသိဘဲ နေမလား။
ဒါပေမယ့် မင်းလမ်းကို မင်း စာတပုဒ်ဖြစ်အောင် ရေးရကောင်းမှန်း မသိဘူး မဟုတ်လား။
အေး…. မြင်တတ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာ အဲဒါကို ပြောတာ။
မဟုတ်ရင် မဟုတ်ဘူး ပြန်ပြော။ မှားနေရင် မှားနေတယ်ပြော။ ငါ့ကိုတော့ ပြောလို့ ရတယ်။ ကိစ္စ မရှိဘူး။
မင်းနေတဲ့ အိမ်က စ, မယ်။
မင်း ဘာအလုပ် လုပ်သလဲ။ တောက်တိုမည်ရ စာရေးတယ်။ စာရေးဆရာ ဖြစ်ချင်လို့ ကြိုးစားနေတယ်။ မင်းမိန်းမက အိမ်ဆိုင် ထွက်တယ်။ ကလေး စားစရာ အချဉ်ထုပ်၊ အချိုထုပ်ကလေးတွေ ရောင်းတယ်။ ဆေးလိပ်ရောင်းတယ်။ လက်ဖက်သုပ် ချင်းသုပ် ရောင်းတယ်။
တရုတ်။ ဖိနပ်ချုပ်တယ်။ ဆိုင်ကြီးတွေက အော်ဒါပေးတဲ့ ဖိနပ်တွေ ချုပ်တယ်။ အလုပ်သမား မရှိဘူး။ မိသားစု လုပ်ကြတာ။
အေး….. အပေါ်ထပ်ကကော ဘာလုပ်လဲ။ တခန်းက အိမ်ရှင်နေတယ်။ တခန်းက အပျိုကြီး ညီအစ်မ နှစ်ယောက်နေတယ်။ လဟာပြင်ဈေးမှာ အထည်ရောင်းကြတယ်။
နောက်တခါ ခေါင်းရင်းအိမ်။ ဘာလုပ်လဲ။ စက်ချုပ်တယ်။ ယောက်ျားဝတ် ရှပ်အင်္ကျီတွေ ချုပ်တယ်။ နာမည်ကြီးတယ်။ ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေတောင် လာအပ်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆိုင်းဘုတ်တော့ မရှိဘူး။
အဲသည် ခေါင်းရင်းအိမ် အပေါ်ထပ်ကကော။ လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံး ဝန်ထမ်း။ ကုန်သွယ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းတခုမှာ အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ ဟုတ်ရဲ့လား။ နာမည်ကတော့ ထားလိုက်ပါတော့။
အိမ်ငှားမရှိဘူး။ မော်တော်ကား ထောင်တယ်။ အငှားလေးဘီးကားကလေး နှစ်စီး ရှိတယ်။ ညဘက်ဆိုရင် အောက်ထပ်မှာ ကားထားတယ်။ လူတွေက အပေါ်ထပ်မှာ နေကြတယ်။
ပြီးတော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်က အိမ်။
အဲသည်အိမ်ကလည်း မော်တော်ကား ထောင်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကားကြီး။ အုတ်တင် သဲတင်တဲ့ ကား။ တနှစ်မှာ နှစ်ခါလောက် အင်ဂျင်ချရတယ်။ လေးခါလောက် လနဲ့ ချီနားပြီး ပြင်ရတယ်။ ကားအို ကားဟောင်းကြီး။
ပိုင်းလော့ မင်ပုလင်းတွေ ဝယ်တယ်။ ဆော်ဒါနဲ့ ဆေးတယ်။ သန့်စင်တယ်။ ပြီးတော့ စက်ရုံကို ကန်ထရိုက်စနစ်နဲ့ ပုလင်းခွံတွေ ပြန်သွင်းတယ်။
မင်းတို့ လမ်းက တကယ် စုံတယ်။
ဘုန်ကြီးကျောင်းလည်းရှိတယ်။ ဆယ့်နှစ်ခန်း စာလောက်ရှည်တဲ့ အုတ်ရိုးနဲ့။ အကျယ်ကြီး။
ပြီးတော့ နောက်ထပ် ဖိနပ်ချုပ်တဲ့ တရုတ်အိမ် တအိမ်လည်း ရှိတယ်။
တခါ တရုတ် မိန်းမလျာကလေး တယောက်။ သူက ဆံပင်တုတွေ လုပ်ရောင်းတယ်။ အလှပြင်ဆိုင် လည်း ဖွင့်ထားတယ်။ သူ့စီးပွါးရေးကလည်း ဆိုးပုံမရဘူး။
အဲသည် အနားမှာပဲ ပါပလာ အခြောက်တွေ လုပ်ရောင်းတဲ့ ကုလားမ အိမ်တအိမ် ရှိသေးတယ်။
နောက်တခု ခေတ်ပေါ်သင်္ဘောသား အိမ်တအိမ်လည်း ရှိတယ်။ ဗွီဒီယိုနဲ့ ဘာနဲ့။ မင်းကလေးတွေ သွားကြည့်နေကျ။
ပြီးတော့ နောက်တအိမ်က လက်နှိပ်စက် ပြင်တယ်။ အဟောင်းတွေ ဝယ်တယ်။ ပြင်ပြီး ပြန်ရောင်းတယ်။ သူကတော့ ဘားလမ်းမှာလည်း အင်္ဂလိပ် လက်နှိပ်စက် ရိုက်တယ် ပြောတာပဲ။ လမ်းဘေးတော့ လမ်းဘေးပေါ့လေ။
အဲ…. လမ်းထိပ် ရောက်သွားပြီ။ လမ်းထိပ်တဖက်က ဆီဆိုင်ကြီး။ ဆီကုန်သည်။ သည်နားတဝိုက်က ထမင်းဆိုင်တွေ၊ အကြော်ဆိုင်တွေနဲ့ အိမ်တွေကို ဆီရောင်းတယ်။ သူတို့ကတော့ ချမ်းသာတယ်။ ကိုယ်ပိုင် မော်တော်ကားနဲ့ ဘာနဲ့။
လမ်းထိပ်မှာပဲ တဖက်ကတော့ ကုန်စုံဆိုင်။ အခု နောက်ဆုံးခေတ်ပေါ် ကုန်စုံဆိုင်ပေါ့။ ပစ္စည်း အစုံရောင်းတယ်။ အလှကုန်လည်း ရှိတယ်။ စာရေးကရိယာတွေလည်း ရှိတယ်။ အိမ်သုံးပစ္စည်း တွေလည်း ရှိတယ်။ ဘီစကွပ်မျိုးစုံ လည်း ရှိတယ်။ အိမ်သုံး ဆေးဝါးလည်း ရှိတယ်။ နောက်ဆုံး တံဆိပ်ခေါင်းကအစ ရှိတယ်။
သည်ဘက်လမ်းထိပ် ပြီးတော့၊ ဟိုဘက် လမ်းထိပ် သွားရအောင်။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် အအေးဆိုင်။
တဖက်အိမ်က မော်တော်ကား ဝပ်ရှော့။ အထူးသဖြင့် ဖင်မီလီယာကားတွေ လာပြင်တာ တွေ့ရတယ်။
တခန်းက ဂေါ်ရင်ဂျီ ကုလားမ။ မနက်တိုင်း မနက်တိုင်း 'တိုရှည်' လုပ်ရောင်းတယ်။ တခုမှ တမတ်။ ကလေးတွေ တန်းစီ စောင့်ဝယ်ရတယ်။
နောက်တခါဆို ပြိုလုပြိုခင် အိမ်ကလေး။ ဆိုက်ကားဆရာတယောက်က အောက်ထပ်နေတယ်။ အပေါ်ထပ်က လက်သမားဆရာ။
အဲဒီ လက်သမားဆရာကို အကြောင်းပြုပြီး သူတို့နဲ့ ကပ်လျက်အိမ်က ပျဉ်တိုပျဉ်စ ပျဉ်ဟောင်းတွေ ရောင်းတယ် ဝယ်တယ်။ အိမ်ဟောင်းတွေ ဝယ်တယ်၊ ဖျက်တယ်။ ယူလာတယ်။ ပြန်ရောင်းတယ်။ သွပ်ဟောင်းတွေလည်း ရောင်းတာပဲ။
နောက် သူတို့နဲ့ မျက်နှာ်ချင်းဆိုင် အိမ်ကကောင်ကတော့ နည်းနည်း လည်တယ်။ လူငယ်ပဲ။ သူကတော့ ဘိလပ်မြေ အတုလုပ်တယ်။ အတုလုပ်တယ် ဆိုတာကလည်း ငါမြင်ပါတယ်။ အစစ်ကို ဝယ်ရသေးတယ်။ ပြီးတော့မှ မြေနီမှုန့်တွေ၊ ထမင်းခြောက်မှုန့်တွေနဲ့ ပြန်ရောပြီး ရောင်းတာပဲ။ အိတ်ကို ဘယ်ဘက်က ဖောက်ကြည့် ကြည့် အစစ်တွေချည့်ပဲ။ အလယ်ကောင်မှာမှ ရောထည့်ထားတာ။ တအိတ်က နှစ်အိတ်ဖြစ်၊ နှစ်အိတ်က သုံးအိတ်ဖြစ်။ ဘိလပ်မြေတအိတ်ရဲ့ ဈေးနှုန်းကလည်း မင်းသိတဲ့အတိုင်း။ ရာကျော်တယ်။ တွက်ခြေကိုက်တာပေါ့။
ဟော….. အံ့သြစရာ ကောင်းတာက စာကလေး အရှင်တွေ ဝယ်လှောင်ပြီး ဖောက်သည်ပေးတဲ့ ကုလားအိမ် တအိမ်လည်း ရှိသေးတယ်။ တအိမ် မဟုတ်ဘူးလေ၊ နှစ်အိမ်။
ပြီးတော့ မင်းတို့ လမ်းထဲမှာ တပ်မတော်က တပ်ကြပ်တယောက်လည်း ရှိသေးတယ်။ ကလေးတွေ တပြုံကြီးနဲ့။ အဲဒီတပ်ကြပ်က ဗလကောင်းကောင်း၊ ဝတ်စုံဝတ်လိုက်ရင် တကယ်ခန့်တယ်။ လူကြီးတယောက်ရဲ့ မော်တော်ကားကို မောင်းရတယ်။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား။
နောက်တခါ အရာခံ ဗိုလ်တယောက်လည်း ရှိသေးတယ်။ မနက်တိုင်း မနက်တိုင်း လမ်းထိပ်ထွက်ပြီး စစ်ရုံးက လာကြိုတဲ့ ဖယ်ရီကားကို စောင့်စောင့် စီးတာ တွေ့တယ်။ အရပ်ထဲမှာတော့ သူရှိမှန်းတောင် မသိရဘူး။ လွှတ်အေးတယ်။
ပြီးတော့ ဘဏ်အရာရှိ တယောက်လည်း ရှိသေးတယ်။ ဘဏ်အရာ ရှိဆိုပေမယ့် ယောက္ခမအိမ် ကပ်နေတာပါ။ သူ့ ယောက္ခမကလည်း မင်းလိုပဲ ရပ်ကွက်လူကြီး။ တခါတုန်းက မြို့နယ် အဆင့်အထိ ပါဘူးသေးတယ် မဟုတ်လား။
အေး…. ပြီးတော့ အထူးခြားဆုံးကတော့ ဒိုဘီသမားအိမ်။ ဒိုဘီသမား ဆိုပေမယ့် အခြား ဒိုဘီ ကုလား တွေလို လူတကာအဝတ် လျှော်တာ ဖွတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူက သီးသန့်။ ယဉ်ကျေးမှု ဦးစီးဌာနက မင်းသမီး မင်းသား ဝတ်တဲ့ အဝတ်တွေ၊ ရွှေချည်တိုး ငွေချည်ထိုးတွေနဲ့ ကန့်လန့်ကာတွေ၊ ကားလိပ်တွေကို လျှော်ရ ဖွတ်ရတာ။ သည်အလုပ်လုပ်နေတာ ကြာလှပြီ။ မိရိုးဖလာ လုပ်လာခဲ့တဲ့ အလုပ်လို့ ပြောတယ်။
နောက် ထူးခြားတဲ့ အိမ်တအိမ်လည်း ၇ှိသေးတယ်။ တနှစ်ပတ်လုံး ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဘူး။ ဘာအလုပ်မှ မရှိဘူး။ တနှစ်မှ တခါပဲ အလုပ်လုပ်တယ်။ အဲဒီအလုပ်ကလည်း တလလောက်ပဲ လုပ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအလုပ်က ရတဲ့ ဝင်ငွနဲ့ တနှစ် စားလောက်တယ်။ ဘာအလုပ်လဲ ဆိုတော့ ပြွတ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်း။ ရေပက်တဲ့ ပြွတ်၊ ကလေးတွေ ရေကစားတဲ့ ပြွတ်။ ပလတ်စတစ်ပိုက်လုံးတွေ ဝယ်။ ဖြတ်။ ထီးရိုးတွေ ဝယ်။ ပြွတ်တံလုပ်။ ပွတ်လုံးတွေ ဝယ် လက်ကိုင်လုပ်။ အဖုံးအပိတ်က ပလတ်စတစ်လုပ်တဲ့ စက်ကလေး ရှိတယ်။ တနှစ်မှ တခါပဲ အလုပ်လုပ်တယ်။ ဝင်ငွေကောင်းတယ်။ သင်္ကြန်မတိုင်မီ တလလောက်က စတာပဲ။ ဆိုင်တွေက အလူအယက် လာဝယ်ကြတယ်။
အဲ…. မေ့လို့။ အဝေးပြေး မော်တော်ကားဂိတ် တဂိတ်လည်း ရှိသေးတယ်။ သမဝါယမပိုင်။ အညာဘက်က လာဖွင့်ထားတာ။
မင်းတို့ လမ်းထဲမှာ သိပ်ဆင်းရဲတဲ့ လူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဆိုက်ကားဆရာတို့။ တိုရှည်သည်တို့။ သိပ်ချမ်းသာတဲ့ လူတွေလည်း ရှိတယ်။ အငှားကားထောင်တဲ့ အိမ်တို့ ဆီဆိုင်တို့။
ပြီးတော့ တရုတ်လည်း ရှိတယ်။ ကုလားလည်း ရှိတယ်။ မြန်မာလည်း ရှိတယ် လူမျိုးစုံ။
ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတောင်မှ ရှိလိုက်သေးတယ်။
အေး… စာတတ်တဲ့ လူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေလည်း ရှိတယ်။ လုံးဝ စာမတတ်တဲ့ လူတွေ လည်း ရှိတယ်။
ပြီးတော့ ရပ်ကွက်ကလည်း ရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတယ်။ ရပ်ကွက်လူကြီး။
သည်အထဲကများ မင်းက စာရေးဆရာ။ အကြောင်းအရာ ခေါင်းပါးသတဲ့။ ဘာရေးရမှန်း မသိဘူးတဲ့။
တခါတခါ စဉ်းစားလိုက်ရင် ခြောက်သတဲ့။
မင်းမို့ ပြောရက်ပလေတယ်။ အံ့ရော။
ရေးပါလား။ ကိုယ့်လမ်းအကြောင်းကို ရေးတတ်ရင် ဝတ္ထုတွေ အများကြီး ထွက်နိုင်တယ်။
[ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၈၉ ဇွန်]
Posted by Maung Aye Win at 3:06 PM
ရေးတတ်ရင် ဝတ္ထုဖြစ်တယ် (၂) -ရေးသူ - မောင်သာရ
ကျမ်းဦးစကား ရေးသူ သိန်းဖေမြင့်
အချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်မှုသည် နယ်ချဲ့ - သိန်းဖေမြင့်
မိတ်ဆက်စကား - သိန်းဖေမြင့်